Koox ka dheesha heerka saddexaad ee Ingiriiska oo ku faantay inay ka fiican tahay Man United iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitter-ka! – Gool FM
Koox ka dheesha heerka saddexaad ee Ingiriiska oo ku faantay inay ka fiican tahay Man United iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitter-ka!
(Manchester) 29 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa isbuucii hore waxa ay barbaro garoonkeeda Old Trafford kula gashay naadiga heerka saddexaad ee Rochdale, waxaana ay ciyaartu ku dhammaatay 1-1, inkastoo ugu dambeyn ay Man United ku badisay 5-3 rigooreyaal ah oo ay u gudubtay wareegga afaraad ee tartanka Carabao Cup.
Kulankan waxaa Man United hoggaanka u dhiibay da’yarkeeda Mason Greenwood, laakiin waxaa ka badbadeeyey siddeed dhaqiiqo kaddib 16-sano jirka la yiraahdo Luke Matheson.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Wycombe ayaa qaab ciyaareed fiican ku jirta iyagoo 3-0 ku garaacay naadiga Rochdale kaddib labo gool uu u dhaliyay Fred Onyedinma iyo Adebayo Akinfenwa.
Xiddiga ugu xoogga weyn kubadda cagtaIngiriiska ee Akinfenwa ayaana inta badan shabaqa soo taabta iyadoo kooxdiisa Wycombe ay kaalinta labaad ka soo gashay miiska kala sareynta League One oo ah horyaalka heerka saddexaad ee dalka Ingiriiska.
Yeelkeede, maadaama ay 3-0 ku dubteen Rochdale, isla markaana ay Man United kaliya barbaro 1-1 la dhaafi weysay ayaa kooxda Wycome waxa ay ku maadeysatay naadiga ugu guulaha badan horyaalka Ingiriiska ee Manchester United.
Kooxda heerka saddexaad ayaana barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraal u dhigan: “RASMI: waxaan ka fiicannahay Man United”, waxaana ay xitaa ogeysiiyeen qoraalka akoonka Twitter-ka ee Manchester United.
Man United oo ku jirta xaalad aad u hooseysa oo xitaa ay ku maadeysanayso koox heerka saddexaad ah ayaa Isniinta soo dhoweynaysa Arsenal kulan ka tirsan horyaalka Premier League kaddibna waxa ay kulankeeda xiga Khamiista la ciyaaraysaa naadiga reer Holland ee AZ Alkmaar.
Macallin Diego Simeone oo maqlay aflagaadadii uu Sergio Ramos u geystay calanwadaha kulankii xalay ee Madrid Debry & Kabtanka Los Blancos oo la ganaaxi karo